साप्ताहिक राशिफल - Weekly Horoscope
दैनिक - Dailyसाप्ताहिक - Weeklyमासिक - Monthlyवार्षिक - Yearly
साप्ताहिक - Weekly
माघ ५ – ११, २०७६
प्रियजनसँगको भेटघाटले सुरुआत रमाइलो रहनेछ। व्यवसायका लागि यात्रा गर्ने अवसर जुर्न सक्छ। तर सोमवारदेखि फजुल खर्च र वादविवादले समस्या निम्त्याउन सक्छ। स्वास्थ्य कमजोर रहनेछ। मालमत्ता हराउने र अर्थ-अभावले सताउने समय छ। सानो काममा अलमलिनुपर्दा विशेष अवसर गुम्न सक्छ। परिबन्धले केही समस्या निम्त्याउन सक्छ। तर अरूका लागि जुट्नुपरे पनि बिस्तारै फाइदा हुनेछ। अप्ठ्यारो स्थिति पार गरेपछि अवसर प्राप्त हुने हुँदा लगनशीलतामा ध्यान पुर्याउनुहोला। सप्ताहान्तमा स्थिति अनुकूल बन्नाले फाइदा हुनेछ।
बृष - Taurus
रोकिएको काम बन्नुका साथै नयाँ काम सुरु हुन सक्छ। प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई तह लगाउन सकिनेछ। व्यापारमा फाइदा हुनेछ। सोमवार र मंगलवार विश्वास दिलाएर धोका दिनेहरूले सताउलान्, साइनो गाँस्नेहरूसँग अलि सावधान रहनुपर्ला। प्रतीक्षा गरिएको उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। रमाइलो व्यावसायिक यात्रा गर्ने साइत जुर्न सक्छ। बुधवारदेखि अस्वस्थताले काममा बाधा पुग्नेछ। व्यावहारिक झमेला पनि आइलाग्न सक्छ। आकस्मिक खर्च बढ्नेछ र शुभचिन्तकहरू समेत टाढिन सक्छन्। सप्ताहान्तमा भने सामान्य उपलब्धि प्राप्त हुने देखिन्छ।
प्रारम्भमा स्वास्थ्य कमजोर रहनाले अध्ययनमा समय दिन नसकिएला। काम बिग्रने चिन्ताले पनि सताउन सक्छ। सोमवारदेखि स्थितिमा सुधार आउनाले व्यापार र उद्योगमा फाइदा हुनेछ। मिहिनेतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। शत्रु र रोग पनि परास्त हुनेछन्। व्यवसायले उचाइको मार्ग अवलम्बन गर्नेछ। प्रियजनसँग भेटघाट हुनुका साथै घर-परिवारमा खुसियाली छाउनेछ। खर्च लागे पनि सोखले मालमत्ता जोड्न प्रेरित गर्नेछ। सप्ताहान्तमा लेनदेनको हिसाबले वादविवाद निम्त्याउन सक्छ। सहयोगी अभावले काम रोकिनेछ।
प्रारम्भमा घरेलु समस्या देखापर्न सक्छन्। अरूलाई दिएको वचन पूरा गर्न नसक्दा समस्या देखापर्नेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूले काममा अवरोध पुर्याउलान्। सोमवार र मंगलवार पेटको खराबीले सताउन सक्छ। पढाइलेखाइमा ध्यान दिन नसकिएला। काम रोकिनाले पछि परिनेछ। तापनि बुधवारदेखि स्थितिमा सुधार आउनेछ भने पहिलेका कमजोरीलाई सुधार गर्न सकिनेछ। व्यापारमा फाइदा हुनेछ र आर्थिक पक्ष पनि सबल बन्नेछ। चुनौतीहरू पार लाग्नेछन्। बुद्धिको उपयोगले गुमेको प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ। व्यापार बढ्नेछ र नयाँ काम प्रारम्भ हुनेछ।
प्रारम्भमा चिताएको काममा राम्रो सफलता मिल्नेछ। दाजुभाइमा आत्मीयता बढ्नेछ भने व्यवसायमा मनग्गे धनलाभ हुनेछ। तर सोमवारदेखि परिस्थिति प्रतिकूल बन्ने देखिन्छ। काम रोकिनुका साथै पारिवारिक समस्याले सताउन सक्छ। आफ्नाले धोका दिनेछन् भने नजिकका साथीभाइ टाढिनाले दु:ख पाइनेछ। साइनो गाँस्नेहरूबाट सजग रहनुहोला। अध्ययनमा समय दिन नसकिएला। अप्ठ्यारा कामको बोझ थपिन सक्छ। तापनि, बुद्धिको उपयोगले लक्ष्यमा पुगिनेछ। सप्ताहान्तमा प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नाले दिगो फाइदाको काम प्राप्त हुनेछ।
सुरुमा आफ्नै कमजोरीले आत्मसम्मानमा प्रश्न उठ्न सक्छ, गोपनीयतामा विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला। मिहिनेत गर्दा सोमवार र मंगलवार आँटेको काम बन्नेछ। पुरुषार्थी कामले धन र मानसमेत दिलाउनेछ। छोटो समयमा लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिनेछ। बुधवारदेखि पारिवारिक असमझदारीले समस्या निम्त्याउला। अवसरवादीहरूले आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन्। साइनो गाँस्नेहरूबाट पनि सजग रहनुपर्ला। परिस्थितिको बन्धनमा परिए पनि युक्तिले काम लिनेहरूलाई फाइदै हुनेछ। भौतिक साधन जुट्नाले सप्ताहान्तमा काम गर्न सकिनेछ।
साता केही उतारचढावमाया रहनेछ। इच्छाशक्ति बढ्नाले नयाँ काम थालनी हुनेछ। आँटले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिनेछ। सरल जीवनशैलीले धेरैको मन लोभ्याउन सक्छ। तर सोमवारदेखि परिस्थिति अलि असहज बन्न सक्छ। विवादमा पछि हट्दै बोली-व्यवहारमा सजग रहनुहोला। अरूको बहकाउमा पर्दा काम बिग्रनेछ। भौतिक साधनकाे कमीले पनि अप्ठ्याराे पर्न सक्छ। सप्ताहान्तमा स्थितिमा सुधार आउनेछ भने शुभचिन्तकहरूको सहयोगले हौसला प्रदान गर्नेछ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल पाइनेछ।
बृश्चिक - Scorpio
प्रारम्भमा आकस्मिक खर्च बढ्नाले अर्थ अभावले सताउनेछ। रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। सोमवारदेखि स्थितिमा सुधार आउनेछ भने आफन्तसँगको सम्पर्कले मनमा आनन्द मिल्नेछ। नयाँ काममा हात हाल्ने परिस्थिति जुट्नेछ। विशेष उपहारका साथै धनलाभ हुनेछ। अध्ययनमा पनि सफलता हातलागी हुनेछ। बुधवार र बिहीवार सानातिना काममा अलमल हुनेछ भने टाउको र आँखाको समस्याले सताउन सक्छ। तापनि सप्ताहान्तमा स्राेत–साधन जुट्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। मिहिनेतले गुमेको स्थान पुन: दिलाउन सक्छ।
सुरुमा आयआर्जन राम्रो हुनेछ। व्यापारमा लाभांश बढ्नेछ भने उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुनेछ। सहयोगीहरू फेला पर्नेछन्। तर सोमवार र मंगलवार खर्च बढ्नेछ। केही अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ला। फजुल खर्चका बीच कामको बोझ बढ्न सक्छ। आफन्तहरू टाढा हुनेछन्। तापनि बुधवारदेखि स्थितिमा सुधार आउनेछ। मिहिनेतले विभिन्न अवसर दिलाउनेछ। परिस्थिति अनुकूल हुनुका साथै प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका प्राप्त हुनेछ। रमाइलो भेटघाट हुनेछ। काममा साथ दिनेहरू प्रशस्तै फेला पर्नेछन्। वादविवादबाट टाढै बस्नुहोला।
प्रतिष्ठित काम गरेर अवसर हात पार्ने समय छ। कर्मयोगले समाजमा स्थापित गराउन सक्छ। विशेष जिम्मेवारी वा नोकरी प्राप्त हुन सक्छ। विशिष्ट व्यक्तिसँग मित्रता बढ्नेछ। परिश्रमअनुसार राम्रै फल पाइनेछ। आयआर्जन बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ। कामको दायित्व पनि बढ्ने देखिन्छ। बुधवार र बिहीवार भने अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ला। अनियन्त्रित खर्चले मन पिरोल्न सक्छ। चिताएको काम रोकिन सक्छ। स्वास्थ्यमा पनि अलि कमजोरी अनुभूति हुनेछ। सप्ताहान्तमा भने परिस्थितिले साथ दिनेछ।
साताको प्रारम्भ र अन्त्य उतारचढावमाया रहनेछ। स्वास्थ्य कमजोर रहनुका साथै अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ला। अरूको स्वार्थमा उपयोग भइने सम्भावना देखिएकाले सजग रहनुहोला। अवसरका लागि जोखिमपूर्ण काममा जुट्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। आफ्ना कमजोरीमाथि खेल्नेहरूले सताउनेछन्। केही चुनौती देखिए पनि प्रयत्न गर्दा समस्याको जड पत्ता लाग्नेछ। केही अवसर प्राप्त हुनेछन्। सुखदुःखमा साथ दिनेहरू पनि फेला पर्नेछन्। लगनशीलताले समस्या सुल्झाउनेछ भने बुधवार र बिहीवार आयस्रोत पनि बढाउन सकिनेछ।
प्रारम्भमा नसोचेको झमेला आउन सक्छ। आफन्त टाढिनेछन् भने अस्वस्थताका बीच कामको बोझ बढ्नेछ। अर्थ–अभाव देखापर्न सक्छ। तापनि मिहिनेतले बिस्तारै चुनौती पार लगाउन सकिनेछ। बुधवारदेखि स्थितिमा निकै सुधार आउनेछ भने सुखदुःखमा साथ दिनेहरू प्रशस्तै फेला पर्नेछन्। रोकिएको काम बन्नुका साथै नयाँ काम सुरु हुनेछ। दिगो काम र साझेदारीबाट राम्रो फाइदा उठाउन सकिनेछ। अवसरले उत्साह जगाउनेछ। तर सप्ताहान्तमा ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सजग रहनुहोला। पछिका लागि गरिएको लगानीले भनेराम्रै फाइदा दिनेछ।
The creation of this universe was done by the combination of earth, water, light, air and sky together. The entire world is based on these five great entities. The human body was also created by the five great entities. The new planets on the sky represent these five great entities. In the Veda, the sun represents the soul and the moon represents the mind. Similarly, the qualities light, earth, sky, water and air are inherent in the Mars, Mercury, Jupiter, Venus and Saturn respectively.
The word, touch, form, taste, smell are the subjects of the five great entities. These subjects are acquired by the five knowledge senses of men. Every human senses longs for its subjective happiness. For subjective pleasures, the planet activates the senses associated to it. The mind is affected by the demand from the sense. Hence,acertain work is based upon our fondness towards it. Forawork, the mind takes approval from the soul. For the work and issues approved by the soul, our mind operates senses and subjects accordingly.
The Rashifal ofaperson is the position at the moon during the time of his birth. According to the position of the dynamic planets in "Chandraraashi", there isachange inaperson's interest, behaviour, health and situation. The willpower of Mind (the Moon) and the discrimination power of Soul (the Sun) are the major factors behind one's performance. The planets, that are indicator to the senses createavariety of circumstances. Human life is entangled in these circumstances. From birth till death, various situations that we face in life like growth and decline, happiness and sorrow, friend and enemy, affluence, scarcity, poverty, disease, state, esteem, children, family including all our specified actions are mobilized by the planets.
The Rashifal presented here has been designed on the basis of classic opinions. In particular, the various horoscope positions of the planets, their daily speed including circumstantial force, and by evaluating other planets "bedh-pratibedh", good and sinned vision and the impact, and mainly by the conclusion of the official texts "Brihatsanhita", "Muhurtachintamani", "Muhurtamartanda", "Phaladipika", "Jaatakaparijata", "Brihaddaivajnaranjanam", an effort has been made to make the horoscope reliable inaclassical way.